| Reef Resilience
Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiveloman'ny olona an-tapitrisany ny jono. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiarabe madinika (amin'ny ankapobeny no faritana amin'ny fambolena fako kokoa noho ny 10,000 taonina isan-taona) dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny toekarena eo an-toerana. Ao amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana, ny ankamaroan'ny trondro dia avy amin'ny fanjonoana izay mahatsiravina sy mahomby, satria na dia ny fanazavana fototra momba ny fomba tahirin-trondro miasa ary ny fahasarotam-panajàna tsy azo atonina. Ny tsy fisian'ny antontam-baovao momba ny isan'ny mponina, fisondrotana mpanjono, ary ny haavon'ny tsindry hazandrano azon'ny jono manohana azy koa dia olana amin'ny jono manerantany; Ny 60% amin'ireo trondro trondro dia tsy voasedra. Ilaina amin'ny fitantanana mahomby ny angona toy izany.
Ny tombana amin'ny tahiry dia manome fampahalalana hitarika ny fitantanana ny jono amin'ny alàlan'ny famelana ireo mpitantana hamantatra ny fiovan'ny toe-trondro rehefa mandeha ny fotoana. Ireo fiovana ireo dia mety hiteraka a fitantanana fitantanana, mikendry ny hanatratra tanjona iray na maromaro vitsivitsy momba ny jono. Ohatra, raha manamboatra tahiry ny mpitantana, ary mahita fa trondro maro loatra ny zana-trondro no mamokatra, ka mamela ny taham-pahazoan-danjany ho ambany, dia afaka mampiasa io fampahalalana io ny mpitantana mba hametra ny fetra amin'ny fetra na ny haben'ny trondro tratra.
Famaritana ny halavan'ny trondro ao anatin'ny tetikasa Palau Stock Assessment Project. Sary © Andrew Smith
Maro ny fomba fisainana momba ny fisorohana ny haran-dranomasina momba ny haran-dranomasina, manomboka amin'ny fomba mahazatra statistika izay mamaritra ny haavon'ny biôma sy ny tombanana Tandrefana maharitra (MSY), amin'ny fomba azo ampiasaina raha voafetra ny angona angona. Rehefa voafetra ny angon-jatony, proxy Azo ampiasaina handinihana ny biomass na ny razana maty.
Ny fanombanana nentim-paharazana nentim-paharazana (toy ny modely ny taonan'ny mponina) dia mitaky be dia be amin'ny angon-drakitra, ny famatsiana ary ny fahafaha-manao. Ny fanombanana ny tahiry nentim-paharazana dia mety hahatratra dolara an-jatony dolara, miaraka amin'ny sambo mpikaroka sy ny mpiasa izay natokana ho an'ireny fanombanana ireny. Noho izany, dia tsy fahita firy amin'ny fisian'ny mpanjono marobe izy ireo, anisan'izany ny fanjonoana haran-dranomasina, noho ny tsy fahampian'ny vola sy ny fahafaha-manao eo amin'ny sehatry ny fikambanana eo an-toerana mba hanangonana sy handinihana ny angon-drakitra. ref
Ny fampahalalana voatondro eto dia mamaritra fomba isan-karazany fanombanana ny tahiry, mifantoka amin'ireo izay azo ampiharina amin'ny angona madinika.
Toro-làlana fandalinana ny tahiry fisakafoanana ho an'ny haran-dranomasina
Ny lisitr'ireo lisitr'ireo lisitra dia amin'ny filaharan'ny habetsahana sy ny kalitaon'ny angon-drakitra takiana amin'ny ambany (PSA) mankany amin'ny avo (Production surplus). Ny fepetra takiana, ny vokatra ary ny fanafarana dia miova arakaraka ny fomba amam-panao ampiasaina.
Karazana fomba fanombanana
Mety misy fepetra takin'ady
PSA: Fahombiazana amin'ny famokarana sy ny fahantrana ref Tantaran'ny tantaram-piainana
Toerana ara-boajanahary sy fisafidianana ny jono
Ny fahatsapana, ny vokatra, ny endriky ny vulnerability; tsy manambara mivantana ny sata Ilaina ny fahaiza-mihena
FAMPIANARANA: Fomba fanaraha-maso haingana ny fanombanana ny toetry ny fisian'ny fisaka ref Fahalalana momba ny toetoetry ny tontolo iainana, toekarena, ara-tsaina, ara-tsosialy ary ara-teknolojia Tomban'ny fanamafisana; tsy manambara mivantana ny sata Ilaina ny fahaiza-mihena
Tsy misy fiantraikany amin'ny ala voajanahary ref Toe-trondro (na CPUE avy amin'ny fanadihadiana ara-tsiantifika) anatiny sy ivelany
Faharetan'ny faharetana anatiny sy ivelan'ny tahiry
Density relatif; dia manondro hoe mety tsy maharitra ny ezaka ataon'ny mpanjono Hevero fa mitahiry tsara ny fitehirizana ary ny toe-draharaha ao anatiny dia mampiseho vahoaka tsy misy mponina
Fomba fiorenana maharitra ref Datafin'ny rohy
Toeram-piarovana amin'ny lafiny (referandaoma) sy / na fironana; dia midika fa raha maharitra ny fisamborana Ny fiheverana ny angon-drakitra avy amin'ny tahotra dia solontenan'ny tahiry, mety hihevitra ny fananganana tsy tapaka sy ny fanjonoana; dia afaka manolotra tombana ho an'ny karazan-tsakafo izay manambatra sy miovaova
Tapa-kevitra sy hazavana fitifirana ref Data ara-tsosialy (ohatra làlan-dàlana, fandehanana, ezaka)
Fanitsiana fanamafisana ny fepetra momba ny fitantanana (ohatra, ny fananana ahazoana alalana); dia manondro hoe mety tsy maharitra ny ezaka ataon'ny mpanjono Matetika dia mitaky fepetra isan-taona
Fanadihadiana momba ny fanadihadiana ref Fahaleovan-tena maharitra ela
Toe-karena momba ny fihinanan-kena MSY or MMSY tondroina Ny fiheverana ny fikambanan'ny habakabaka dia mampiseho tsara ny fisian'ny karazany
Famaritana ny famaritana ref CPUE
Toe-karazan-tsakafo momba ny toetoetrany; dia manondro fa mety haharitra ny fanjonoana Milaza ny CPUE sy ny trondro dia solontenan'ny jono; Manjary tsy miova ny trondro
Fakana an-kolaka ny famarotana (DCAC) ref
Fampihenana ny fihenan'ny famatsiam-bola (DB-SRA) ref Fikarohana tantara (> taona 10)
Tombom-pandrosoana maharitra; dia midika fa raha maharitra ny fisamborana Ny tahan'ny maty voajanahary dia tokony <0.2; tsy mandeha tsara amin'ny tahiry efa lany tanteraka
Modely ho an'ny famokarana ref CPUE
Toe-karazan-tsakafo momba ny toetoetrany; dia midika fa raha maharitra ny fisamborana Ilaina ny mifanohitra amin'ny CPUE sy ny ezaka
Ny mpitantan-tsakafo dia afaka mampiasa endriky sy tara-pahazavana (izany hoe loha-hevitra) mba hanombanana ny toeran'ny fisian'ny fisotroan-dronona amin'ny lafiny biomass, ny fahaiza-manao, ary ny faharetana.
Ny famaritana ny fampiasana ny fampitomboana ny fampiasana sy ny teboka fanondroana dia mitaky ny mpitantana hijerena ny zavatra azo alaina na azo ahazoana ny zava-misy ara-tsosialy, ara-tontolo iainana ary ara-toekarena eo amin'ny fisian'ny fisamborana sy ny fiarahamonina. Ny famaritana ny teboka referans ihany koa dia mitaky fahatakaran-tsaina momba ny mety ho endriky ny indostrialy.
Endriky ny gidro sy ny lamin'asa
Ny endriky ny fitomboana dia ny fepetra sasantsasany momba ny fisian'ny fisakanana, anisan'izany ny fampitomboana ny isan'ny trondro sy ny kalitao (ohatra ny habetsaky ny trondro amin'ny fitrandrahana), ny endriky ny statistika amin'ny fampiasana modely (ohatra: biomass araka ny fanombanana ny modely fanombanana), (biomass) (ohatra: ny taham-pitranga na ny tombantomban'ny dipoavatra) ary ny isan'ny maty an-jatony (ohatra, ny fampiasana kapila mety ho an'ny orinasa na ny lavarangan'ny fitrandrahana), na ny indirect indirect (ohatra ny fampitomboana ny fotoana fitsangatsanganana ho fampihenana ny tahiry eo an-toerana).
Misy fomba maro handrefesana ny fahombiazan'ny fisian'ny fiaraha-monina, biolojika, toekarena ary fampandehanana. Matetika ny mpitantana orinasa no mampiasa ny fitsipika momba ny fijinjana mba hampisehoana hoe rahoviana ary firy ny manitsy ny fitantanana rehefa miova ny endriky (ho tsara kokoa na ho ratsy kokoa). Ny mpitantana dia mikendry ny hitazona ireo famantarana amin'ny Target Reference Points (orange). Ny fitsipika mifehy ny fikojakojana matetika dia lasa mitombina kokoa raha toa ka tsy tratra ny sasantsasany, toy ny Limit Reference Points (volomparasy).
Ireo mpandinika dia mila tsotra, mora takarina ary mandrindra, ary tokony hivoatra miara-miasa amin'ny mpikirakira fisaka toy ny mpanjono, ny mpitantana loharano, ny fikambanana tsy miankina, ary ny mpahay siansa. Raha azo atao, dia tokony ho ny fisehoana endri-tsoratra maromaro no ahafahana manatsara ny fisian'ny fisavana. ref
Ireo mari-pamantarana dia avo lenta kokoa ho an'ny indikativa izay ahafahana mandinika ny fifandraisana misy eo amin'ny fampitomboana ny tanjona sy ny tanjon'ny fisamboaran-javatra. Misy karazam-pitaovana roa karazana: 1) teboka iray mifototra amin'ny tanjona dia endri-tsoratra mifandraika amin'ny toetry ny fanjonoana izay maniry tsara; 2) teboka iray farafahakeliny dia mari-pamantarana iray mifanaraka amin'ny toetry ny fisian'ny tsy fahampian-tsakafo (ohatrinona loatra).
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana ho an'ny Fanombanana ny Tobin'ny Saha: avy amin'ny Data to Recommendationmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana ho an'ny Siansa momba ny Siansa sy ny Fanombanana ny tahirymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-làlana ho fanangonana tahirin-trondro amin'ny haran-dranomasina Pacificmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampidiran-tsokajy ho an'ny fanadihadiana ara-trondro tropikaly - Fizarana 1: Manual
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEcosystem Approach to Fisheries